Canabka awood u user si ay u qoraan lix labaad video clips dheer iyada oo ay camera in-app, taas oo kaliya rikoor doono oo keliya marka shaashada la taabtay. Sidaas user edit karaa on Daqsi ama abuurto saamayn mooshin stop ka dibna daabici karo in lix-labaad video dheer iyada oo goobta shabakada bulshada geedka canabka ah ee.
October 24, 2013, canabka oo soo bandhigtay update ah Yimid laba muuqaalada weyn cusub KAL-FADHIYADA IYO Time Travel. Kulamo u ogolaataa user ay u badbaadin video ah ka hor inta uu soo dhameystay iyo soo laabtaan in ay waqti ka dib. User shaqayn kartaa ilaa 10 posts waqti. Si aad u isticmaasho user habkaani kaliya u baahan tahay inay hesho icon cusub kaalinta dhinaca midig kamarada si loo badbaadiyo ama la furo fadhiga ka badbaadiyay. Feature labaad loo yaqaan Time Travel ogolaanaysaa user tirtirto, habayno ama bedelo goobaha ka hor inta boostada. In la soo dhaafay, dadka isticmaala in ay toogtaan video ah oo joogto ah oo aan khalad kasta oo ay leeyihiin, weligoodna ma tegi karin dib ugu soo laabtay markii la canabka. Isticmaalka this feature cusub waa mid fudud sida looga faa'idaysan bar cagaaran halka toogasho ama laga faaiidaysanayo Edit laakiin halka previewing video ah. Update waxaa laga heli karaa labada macruufka iyo Android.
Sida loo edit video la Time Travel
Tafatirka video ah geedka canabka ah oo isticmaalaya feature cusub Time Socda app geedka canabka ah waa mid aad u fudud. Just raac tallaabooyinka hoos lagu qeexay:
Talaabada 1: fur app canabka on telefoonka gacanta iyo login isticmaalaya xisaab Twitter sax ah ama iyada oo loo marayo cinwaanka wax Email sax ah.
Talaabada 2: Si aad u billowdo duubo, ka jaftaa icon duubay hoose ee shaashadda. Waxaa bilaaban doona camera in-app. Taabo aragtida camera inuu ku soo bilowdo diiwaan. Xusuusnow camera duubayaan goobaha ay inta aad taaban shaashadda. Waxay joojin doonaan duubo marka aad ka view camera saaro fartaada. Ha illoobin in la sameeyo dhowr goobaha. Waxaad arki doontaa bar ah horumarka cagaaran sare ee shaashadda.
Talaabada 3: Waxaad bilaabi kartaa sixiddiisa video ah oo xilligan la joogo inta lagu duubo waxaa buuxin weli. Si tan loo sameeyo, ka jaftaa bar horumarka cagaaran sare ee video ah.
Talaabada 4: Sida caadiga ah aad xaalkaa doonaa video ah ka dib markii uu soo dhameystay duubay. Marka la duubo waa dhameystiran app qaadan doontaa dhawr ilbidhiqsi si ay u sameeyaan video ah. App ayaa si toos ah ku eegaan doonaa video ah ka dib markii ay ku dhameysatay kaalinta samaynta video ah. Tubada in Edit button dhinaca midigta sare ee video halka previewing video ah.
Talaabada 5: Ka dib markii laga faaiidaysanayo button Edit ayaa lagu bedeli badbaadi. Waxaad sidoo kale arki doonaan goobaha yar ee hoose ee shaashadda.
Talaabada 6: Hadda taaban goobta oo jiidin qaar ka mid ah meel kale si amar loo beddelo kaas oo goobaha la soo bandhigi doonaa.
Tallaabo 7: Waxaad sidoo kale tirtiri kartaa goobta ah. In sidaa la yeelo, dooro goobta iyo jiidi goobta in ay u bar cas ku yaalo kor ku xusan video iyo hoos u goobta in bar cas.
Fiiro gaar ah: Sida caadiga ah ma waxaad ka heli doontaa wax bar cas. Waxay ka muuqan doontaa oo kaliya ka dib markii aad bilowday inaad jiidi goobta dhinaca jihada sare.
Tallaabo 8: Ugu dambeyntii inay isbedel ku tuubada joogto ah button Save the dhinaca midigta sare ee video ah. Hadda, ku eegaan video mar kale iyo haddii ay weli u baahan yihiin in ay sameeyaan qaar ka mid ah edit dheeraad ah oo mar kale raac tilmaamaha.
> Resource > Video > Sida loo Edit canabka Videos